Maraykanka oo ka tacsiyeeyay weerarkii 14 Octaber ayaa
President Buhari’s words and silence go badly with the protesters
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto.
Safaarada Mareykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay in ay la murugooneyso shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed oo maanta u baroordiiqaya xuska 14-kii Oktoobar 2017 oo ah maalin uu Muqdisho ka dhacay qarax dhaliyay dhimashada boqolaal shacab ah, Dhawaaca boqolaal iyo bur-bur hantiyadeed.
Safaaradu waxay sheegtay in dowaladda Mareykanka la xanuunsaneyso qoysaska dadkii ku dhintay isla markaana ay ku garab taagan tahay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
“Maanta, waxaan xusuusan nahay dhibanayaashii weerarkii argagaxa lahaa ee 14-kii Oktoobar, 2017, ka dhacay Muqdisho ee ay ku dhinteen 587 muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan & boqolaal kale ku dhaawacmeen” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Safaaradda.
“Waxaan la murugoonaynaa qoysaska dhibanayaasha waxaanan garab istaageynaa shacabka & dowladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah argagixisada” ayaa lagu yiri qoraalka.
Qaramada Midoobay ayaa dhankooda ka hadlay weerarkaas khasaaraha badnaa iyaga oo carrabka ku adkeysay sida ay u garab taaganyihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
WMA 66 posts
RW.Rooble:-Culimaddu waa in ay qaataan doorka ka hortaga
19 Secret Issues You Can Do with a Waffle Iron
Africa’s Covid-19 demise toll nears 40,000 –…
Africa’s Covid-19 demise toll…